USB Type-C, Kuendesa Simba uye Inogadziridzwa Magetsi Magetsi
Iyo dhizaini yeUSB (Universal Serial Bus) yanga ichishandiswa seyakajairwa yekubatanidza uye nemasaini avo akabatana uye kuendesa magetsi kubva 1996. Munguva ino pakave nekuchinja kwakawanda kune zvakatemwa kugadzirisa mashandiro emasystem anoshandisa aya matanho. Manheru ...
USB Chaja (USB Simba Kuendesa)
USB yakashanduka kubva kune data interface inokwanisa kupa masimba mashoma kune wekutanga mupi wesimba ine data interface. Nhasi uno michina yakawanda inobhadharisa kana kuwana simba ravo kubva kuzviteshi zve USB zviri mumalaptop, mota, ndege kana zvigadziko zvemadziro. USB rave kwese kwese simba socket kune vakawanda s ...
USB-C uye Kuendesa Simba Kujekesa
Inowanikwa pachiso che PD Gan charger pane maviri matsva madoko: USB-C uye USB-C Simba Kuendesa. Yekutanga ingori chiteshi che USB-C chinoshanda uchishandisa yazvino USB 3.1 yekuchaja zviyero kusvika kumatatu amps. Yechipiri inotsigira yakasimba yekuchaja tekinoroji inonzi Simba Dhirivhari. Kuendesa Simba (PD) i ...
USB PD & Type-C charger indasitiri ruzivo
USB PD & Type-C Asia Ratidza Yekuchaja Musoro Network yakatanga chiitiko kusimudzira iyo inokurumidza kuchaja indasitiri, iyo yakaitirwa gumi nemaviri akateedzana zvikamu. Kwemakore mashanu apfuura, iyo yekukurumidza indasitiri yekuchaja musangano inoitwa nechaja Head Head yakahwina kushingairira kutora chikamu kweakawanda ...
Iyo Yekuvandudza Muitiro weGaN USB Chaja
GaN (gallium nitride) magetsi emagetsi aive nekuvapo kukuru paCES muna 2020 - zvichiratidza kuti gore rino richaona kufarira kwakawanda uye kugamuchirwa mune izvi zvidiki, zvinokurumidza kuchaja, uye mamwe magetsi anoshanda magetsi. Pakati pegore, pane humbowo hwakawanda iyi ndiyo mamiriro. Iyo pro ...
Huawei Kupeta Screen Nhare mbozha Mate X2
Munguva pfupi yapfuura, chizvarwa chitsva chakamirirwa kwenguva refu chaHuawei chekupeta chinovhara nhare mbozha Mate X2 yakazoburitswa zviri pamutemo. Iyi nhare mbozha yakadzvanywa panenge 3000USD yakagadzirirwa ne5nm maitiro Kirin 9000 mureza wepurosesa. Mushure mekuburitswa, saizi yechidzitiro inosvika 8 inches. Inotora ...
Mazuva ekukomberedza akakomberedza zvidhinha zvikuru zvemagetsi netambo dzakawanda kuti zvigadzirwa zvako zvigare pamusoro zvinogona kunge zvichipera. Kumirira maawa kuti yako smartphone kana Laptop kubhadharisa, kana kushamisika nechaja inotyisa inotyisa, zvinogona zvakare kuve chinhu chekare. GaN tekinoroji iri pano uye inovimbisa ku ...
Chii chinonzi USB Power Dhirivhari?
Nekudaro, iyi nyaya yekuenderana yave kuda kuve chinhu chekare nekuunzwa kweiyo USB Power Dhirivhi Tsanangudzo. USB Power Dhirivhari (kana PD, kwenguva pfupi) ndiyo imwechete yekuchaja standard iyo inogona kushandiswa kwese kwese USB zvishandiso. Kazhinji, mudziyo wega wega unobhadhariswa ne USB unenge uine yavo ...
Chii chinonzi Gallium Nitride?
Gallium Nitride ndeye bhanari III / V yakananga bandgap semiconductor iyo inokodzera zvakanaka kune-emagetsi-simba transistors anokwanisa kushanda pane kwakanyanya kupisa. Kubva kuma1990, yanga ichishandiswa kazhinji muchiedza chekuburitsa diode (LED). Gallium nitride inopa mwenje webhuruu unoshandiswa pakuverenga-kuverenga muBlu-r ...